Wasaarada Naafada Soomaaliyeed
Wasaaradda Naafada Soomaaliyeed Maxaa ku Dhacay???
Baaq kasoo Baxay Naafada Soomaaliyeed
Siciid M Hussein “Indhoole”
Waan Salaamayaa dhamaan akhristayaasha soomaaliyeed!
“Kama reeyayaal bow tashaday oonna sii korodh” Naafada soomaaliyeed oo markeedii hore murugo iyo calool xumo ku seexan jirtay kuna soo toosi jirtay ayaa il naxariis leh waxay ku eegaysay raggii curyaamiyey oo Nayroobi ku shirsanaa. Waxaase murugadii u sii labanlaabay markay ogaadeen in la sameeyey wasaarad guryihii dumay dhista lana ilaaway wasaarad dhista naafada soomaaliyeed iyadoo ka dhisaysa lafohooda jajabay , qalbigooda murugadu buuxisy ,iyo indhohooda burburay. Wasaaraddan oo aan horay u jiri jirin waxaan u arkaynay in ay kaba muhiimsantahay tan arimaha dibadda maadaama 60% Soomaali naafowday waa marka lagu daro inta mooraalka ka naafawday haba caga qabtee si loo daboolo baahida ku habsatay ee ay qabaan .
Marka waxaanu leenahay “mar hadaanan ka aarsan karin ninkii aabahay dilay aan ooyee albaabka ii xira.” Arintayadu waxay noqotay haduun baan wax ogaaday in awrka nalagu kacsanaayey lana baabi,inaayey shabaabnimadayadii ,diintayadii iyo dalkayagii .
Wixii dhacayaba dhacee ,waxaanu filaynaa inshaa allaah inaanay cid dambe idiin naafoobi doonin oo laydin bartay. Hadaad wasaaradayada ku dhawaaqi waydaan oo waliba wasiirkeedu yahay naafo aqoon leh oo anaga naga mid ah adduunyadana noo waydiin kara ulihii indhoolayaasha, lugihii hagaayey, gacmihii aartifiishaalka ahaa iyo wax kaste oo mooraalkayaga wanaajin kara ama naafada aduunka naga mid dhigi kara sida shaqo ama mushahar naafo.
Hadaba hadii baaqa iyo soo jeedinta naafada Soomaaliyeed la iska dhaga mariyo sidaa hadaba dhacday oo lagu sii wado sidaa wuxuunbaa imanaysa. Sida in uu nin aan nafba doonaynin oo aan awalba waxba ku noolayni isku qarxiyo raga xafiisayada daahyada leh fadhiya! “Nin ku xiga naxliga kuu gala nudayga kaa goo” Waxaan jeclaan lahaa inaan qoraalkaygan ku soo gabagabeeyo “Ninka dayrta maanta ah u dooyaystay madaxnimo uba diidi maynnee horta mee dalkii iyo dadkii uu xukumi laa “.
Waxan jeclaan lahaa in dadwaynaha Soomaaliyeed gaar ahaana naafada in ay arintan odhaahdooda ka gaystaan cidii ra’yigaa wax ku biirinaysa ama wax ku saluugsanina ha igala soo xidhiidho email address kan:
Xusuus: Qoraagu waxa uu si gaar ah uga codsanayaa in farriintaan la gaarsiiyo dhammaan shacabka iyo dowladda cusubba.